राहदानीमा चुच्चे नक्सा खै ? - Thoskhabar
राहदानीमा चुच्चे नक्सा खै ?
काठमाडौँ: नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएको १५ महिना भइसक्दा पनि राहदानीमा चुच्चो सहितको नयाँ नक्सा समेटिएको छैन ।नयाँ वितरण गरिएको राहदानीमा पुरानै नक्सा सहितको निशान छाप राखिएको हो ।
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर-१३ का मनोज खड्काथोकी सुनार आइतबार नयाँ राहदानी लिन राहदानी विभाग नारायणहिटी पुगेका थिए । तर राहदानीमा पुरानै नक्सा देख्दा उनी अचम्मा परे । ‘हाम्रो देशको नयाँ नक्सा आएको होइन र ? यहाँ त पुरानै छ,’ उनले सोधे ‘चुच्चे नक्सा कहाँ हरायो ?’
बाराको कलैयाका सादाम अन्सारीले पनि विदेश जान राहदानी बनाएका छन् । उनको राहदानीमा पनि उही पुरानै नक्सा छ । २०७७ जेठ ७ गते नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नक्सा जारी भएयता राहदानी विभागले कम्तिमा ५ लाख बढी नयाँ राहदानी वितरण गरिसकेको छ । तर, सबै राहदानीमा पुरानै नक्सा छ ।
राहदानी विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालका अनुसार अहिले वितरण गरिरहेको राहदानी सन् २०१० मा छापिएको थियो । राहदानी छाप्न ग्लोबल टेन्डर गरिन्छ । त्यसबेला ७० लाख पासपोट छापिएको थियो ।
‘प्राविधिक कारणले राहदानीमा नयाँ नक्सा राख्न सकेका छैनौँ,’ अर्यालले भने, ‘मंसीरपछि नयाँ नक्सासहितको ई-पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’
यस्तै २० लाख नयाँ राहदानी छापिने प्रक्रियामा रहेको उनले जनाए । विभागले आफ्नो कार्यालयको भित्तामा भने नेपालको नयाँ नक्सा झुण्डाएको छ । सामान्य, आधिकारिक, कुटनीतिक र यात्रा गरी चार प्रकारका राहदानी प्रचलनमा छन् । अब तेस्रो पुस्ताको राहदानी वितरणको तयारी छ । सभार ः अन्नपूर्ण पोस्ट्
Previous articleबाध्यताले जादैं छु परदेशमा
Next articleबेपत्ता दुईजनाको शव फेला, मृतक संख्या चार पुग्याे